Natiijada tirokoobkii Kenya oo ay Hogaamiyeyaasha Soomaalida naqdiyeen
By Caalamka On Nov 6, 2019
Hogaamiyeyaasha Soomaalida oo naqdiyey natiijada tirokoobkii Kenya
NAIROBI, Kenya – Ku dhowaad 72-saacadood kadib markii ay si rasmi ah u soo baxday natiijada tirokoobkii Kenya ee 2019-ka, hogaamiyeyaasha Soomaalida Kenya ayaa diidey maxsuulka kuna baaqay “xisaab hubin sax ah”.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo Isniintii lagu wareejiyay macluumaadka ayaa wuxuu ku amray Wasaaradda Lacagta in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu adeegsato dakhli uruurinta gudaha.
Sidda laga soo xigtay Guddiga Tirokoobka Qaran ee Kenya, dadweynaha ayaa tiradoodu waxay gaareysaa 47.6 milyan, taas oo ka dhigan in tobban sano ay ku kordheen 9-milyan oo ruux.
Dadka ku nool gobolada Mandera, Wajir iyo Garissa oo Isniintii muran geliyay maxsuulka ayaa la fariistay hogaamiyeyashooda oo dhinacooda kusoo biiray naqdinta natiijadda soo baxday.
Hogaamiyaha Aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo Arbacadii ganafka ku dhuftay ayaa ku eedeeyay Guddiga in ay “midab-baleen natiijadda ayna faquuqeen shacabka degmooyinka Waqoori Bari”.
Diblomaasiyad hore oo lagu dhex dilay xerada Xalane
Mareykanka oo cunaqabateyn saarey xeer-ilaaliyihii hore ee Kenya
Aadan Barre Ducaale, oo xulafo muhiim u ah madaxweyne Uhuru Kenyatta, ayaa soo jeediyey xisaab uruurin sax ah oo lagu sameeyo natiijadda oo uu sifeeyay “mid aan loo dhameyn”.
“Uma maleynaayo in aad karin kartaan lambaradda…hadii aad dooneysaan kalinimo u qaata qolka jiifka ma ahan qolka fadhiga,” sidaas waxaa laga soo xigtay Xildhibaankan laga soo doortey Garissa.
Mr Aadan oo sii hadlaya ayaa yiri: “Hadii aad haystaan rag badan yay guursanayaan? Iyaga miyaa is-guursanaya? Waxaan dooneynaa in aan xog-uruurinta oo ceyriin ah oo kala fur-furan”.
Dareenkaas waxaa ku taageeray Senator-kii hore ee Mandera, Billow Kerrow, kaasoo ku adkeystay in tiradda dhalashadda ee gobolka aanan loo fasiran karin hoos dhac ku yimaada dadweynaha.
“Waqooyi Barri [saddex is-maamul goboleed] tirokoobkoodii 2009-kii wuxuu ahaa 2.39 milyan, shaleyna, xogta lasoo saarey waa 2.47 milyan, macnuhu kor u kaca waa 80,000 – gobolka ugu dhalmada badan, sidee isku qabaneysaa?” ayuu is-waydiiyey mudanaha.
Gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya, ahaana Xildhibaan laga soo doortey Lagdera, Faarax Macalin, ayaa gaashaanka u daruuray natiijadda oo uu ku sifeeyay “mid aanan si fiican loo maareyn”.
Dad uusan magacaabin oo Dowladda Dhexe ee Kenya ka tirsan ayuu ku eedeeyay in ay “maleegeen xaaladan aan habooneyn”.
“Tirokoobka dadweynaha Kenya mar walba waxaa loo maareeyaa si qaldan. Hogaamiyeyaasha dhexe ee Kenya haatan waxay u dabaaldegayaan in ay hoos u soo ridaan bulshadda Soomaalida”.
Faarax ayuu ku daray: “Tobbankii ugu fiicnaa hogaamiyeyaasha dhexe ee Kenya waxay ahaayeen kuwa hurda, kusoo toosa kuna riyooda dadweynihii hore ee Waqooyi Bari. Xusuusnow meesha loo socdo waa dhulka”.
Gudoomiyaha Mandera, ayaa wacad ku maray in ay maxkamad la kori doonan natiijadda. Hogaamiyeyaasha sarre ee dowladda ayuu ku dhaleeceeyay in ay si qaldan u maareeyeen maxsuulka iyaga oo eegaya “been abuur siyaasadeed”.
“Ma aqbali karno fikrad ah in hay’ad dowladeed ay ku dhex biirin karto dacaayad siyaasadeed go’aanno muhiim ah oo siyaasadeed oo si xun u saameyn doona jiilalka,” ayuu yiri Cali Roobo, isagoo ku goodiyey maxkamad.
Agaasimaha guud ee Guddiga Qaran ee Tirokoobka Kenya, Zachary Mwangi, oo difaacay kooxdiisa, ayaa sheegay in natiijada ay kusoo baxday nidaamka saxda ah, wuxuuna meesha ka saarey “maareyn xumo”.
Sidda laga soo xigtay natiijada muranka keentay, dadweynaha gobolka Mandera waa 867,000. Sanadkii 2009-kii waxay ahayd 1.02 milyan. Wajeer, sarre u kaca waa 100,000, halka tiradda haddana tahay 781,000.
Wallow uu sarre u kaca uu jiro rayidka Garissa oo lagu sheegay 841,000, haddana lamberka ragga ayaa ka badan dumarka. Guud ahaan bulshadda Waqooyi Barri waxaa lagu qeexay 2.5 milyan; horey waxay u ahayd 2.3 milyan.
Tirokoobka dadweynaha ayaa muhiim u ah qorsheyaasha horumarinta ee dal walba. Si lamid ah, waxay door ka cayaareysaa yareynta faqriga, is-qabqabsiga dhulka iyo jaan-goynta dakhli uruurinta sidda canshuurta.
Intaas waxaa wehlisa, natiijadda tirokoobka ayaa lagu ogaanayaa qabiilka maamulaya siyaasadda guud ee waddanka Kenya.
Waqti xaadirkaan, dalkan dhaca Geeska qaaradda Afrika ayaa waxaa ka taagan dood culus oo madaxda kala qeybisay taas oo ku saabsan in dalku kasoo wareego nidaamka madaxtooyadda una guuro baarlamaani.